July 2016 – Gentleman Magazine
သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဖို့ လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် အဆင့်(၅)ခု သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က အလှမ်းဝေးလွန်းတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါသလား။ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့က အရမ်းလွယ်တယ်လို့ ပြောရင် ယုံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်(၅)ခုနဲ့ ပြည့်စုံဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ၁။ သင့်စိတ်ဆန္ဒကို တိုးတက်အောင်မြင်စေနိုင်မယ့် လူတွေနဲ့ ၀န်းရံထားပါ။ သင့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု
ကွန်ဒုံးအသွင်အပြင်များ ၁။ ချောဆီပါဝင်မှုကို ကြိုက်မကြိုက် ဆုံးဖြတ်ပါ။ အချို့သော ကွန်ဒုံးအမျိုးအစားတွေက ချောဆီသုတ်လိမ်းထားပြီးသား ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီချောဆီက သင့်ပစ္စည်းပေါ်မှာ ကွန်ဒုံးဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူးအောင် ကူညီပေးနိုင်သလို လိင်ဆက်ဆံရာမှာလည်း ပွတ်တိုက်မှုအားနည်းစေတဲ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပေါက်ပြဲမသွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောဆီပါပြီးသားကွန်ဒုံးတွေကို အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေက ချောဆီကို သီးခြားဝယ်ယူအသုံးပြုရတာကို
သူမ မနေ့ညက လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း လက္ခဏာ ၅ ရပ် သင့်ဘော်ဒါတစ်ယောက် မနေ့ညက ကောင်မလေးချောချောလေးနဲ့ တူတူ အိပ်ခွင့်ရခဲ့ရင်တော့ သိသာလွန်းနေမှာပါ။ လေလေး တစ်ချွန်ချွန်နဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ပြုံးနေမှာပါ။ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သင့်ကိုလာပြောပြနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမတွေ ဆိုရင်ရော??
အသန့်ကြိုက်သူတို့အတွက် သန့်ရှင်းရေးအကြံပြုချက် သင်က အသန့်ကြိုက်ပါသလား ? သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကရော အမှန်တကယ် သန့်ရှင်းနေပြီလို့ ထင်ပါသလား ? ဟုတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အ၀တ်အစားတွေကို ရုပ်သိမ်းပြီးတာနဲ့ ခေါက်ထားတတ်တယ်။ အိပ်ရာထဲကို အစားအသောက်တွေ ယူသွားလေ့မရှိဘူး။ သွားလည်းပုံမှန်တိုက်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်အချိန်က နောက်ဆုံးဖုန်သုတ်ခဲ့တာလဲ မှတ်မိပါသလား။ သတိထားကြည့်ပါ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့နေနိုင်ဖို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို စတင်ချဉ်းကပ်ရာမှာ ယောင်္ကျားလေးတွေအနေနဲ့ ဘာစကားတွေ စပြောရမလဲဆိုတာကို အခက်တွေ့ကြရသလို အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေရင်းနဲ့ ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းနည်းက တကယ့်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခံယူချက်မှန်ကန်နေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောနေချိန်မှာ သင်ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာက အရေးကြီးပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးအများစုက သူတို့ ဘာလုပ်တယ်၊